Weeraryahanka reer France Karim Benzema ayaa seegi doona safarka Real Madrid ee Talyaaniga ee ay ku wajahayaan Atalatna lugta hore ee wareega 16ka Champions League Arbacada.
Real Madrid oo qaab ciyaareed fiican ku jirtay afartii guul ee ugu dambaysay ee ay gaadhay La Liga markii ugu horaysay xilli ciyaareedkan ayaa ka maqnayd Karim Benzema dhaawac ka soo gaadhay kulankii Valencia.
Tababare Zidane wuxuu rajeynayey inuu Benzema ku soo ceshto taam ahaanshihiisa kulankii Atalanta, laakiin maanta waxaa la xaqiijiyay inuu laacibka dib ugu soo celin doono safka koowaad isla markaana uu raadsado xiddig kale oo uu ku bedelo.
Dhaawaca Karim Benzema ayaa la micno ah in Zidane uu weyn doono sagaal ka mid ah xiddigihiisa safarka ay ku tagayaan Bergamo, iyadoo maqnaanshaha Benzema uu yahay mid walwal badan sii qaba.
Karim Benzema oo 17 gool u dhaliyay Real Madrid xilli ciyaareedkan isla markaana dhaliyay 34 boqolkiiba goolashiisa ayaa ku biiraya Sergio Ramos, Eden Hazard, Fede Valverde, Rodrygo, Marcelo, Eder Militao, Dani Carvajal iyo Alvaro Odriozola.
Ciyaaryahanka khadka dhexe Casemiro ayaa noqon doona gooldhaliyaha ugu sareeya kooxda safarka Atalanta, waxaa ku xigi doona Luka Modric (afar) iyo Vinicius (seddex) xilli ciyaareedkan, waana sababta uu Zidane uga walwalsan yahay dhaawaca Benzema.
Mariano Diaz, oo kaliya hal gool u dhaliyay Real Madrid xilli ciyaareedkan, ayaa ka ciyaari doona weerarka iyadoo la filayo inuu qaado masuuliyada culus ee ka ciyaarista booska Benzema.
Goolasha ciyaartoyda Real Madrid ee u safraya Italy:
Arsene Wenger ayaa saadaaliyay dhibcaha